Aza manadino PR nentim-paharazana | Martech Zone
Talata, Oktobra 11, 2011 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Manolotra fihaonambe isam-paritra izahay anio ary mihaino fampisehoana PR. Fifandraisana amin'ny vahoaka manana voadona ara-toekarena tokoa, fa ny masoivoho PR izay namorona fifandraisana matanjaka amin'ny haino aman-jery lehibe dia miroborobo. Niara-niasa tamin'ny orinasa matanjaka ny maso ivoho, Ditto PR, nandritra ny herintaona mahery izao ary nanana valiny mahatalanjona izahay.
Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia nanana tranokala vaovao ary tsy misy fahefana an-tserasera, saingy mila miteraka fangatahana be dia be. Dittoe PR dia afaka nikendry ireo magazain'ny indostria sy webazines (fivarotana famoahana an-tserasera) ary nahazo lahatsoratra am-polony tamin'izy ireo tamin'ny volana voalohany. Ny fandrakofana dia nanampy anay hampiroborobo ny laharan'ny milina fikarohana ary nampitombo ny fahitana ny marika… ka nahatonga ny tahan'ny tsindry ambony noho ny dokam-barotra karamany.
Fotoana mampino ihany koa ny famoahana gazety. Atambatra amin'ny fanatsarana ny fikarohana, fampahalalam-baovao vao haingana izay nozarainay nasionaly ho an'ny orinasam-pandraharahana nahazo hevitra maherin'ny 1000, taham-pivoarana 4%, ary maherin'ny 30 ny backlinks mahery ao amin'ny fonenany. Ny tombony eto dia tsy isa marobe… isa ambony izy io ary misy ifandraisany be dia be. Ny famoahana gazety dia navoaka mivantana tamin'ny mpihaino marina. Ny famoahana gazety dia nitarika ny mpamaky hiverina amin'ny pejy fotsy sy fipetrahana izay nahitana ny angon-drakitra prospect. Mampiasainay ihany koa ny famoahana gazety amin'ny bilaogy orinasa… noho izany dia misy atiny tsara ihany koa.
Amin'ny fijerena ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola, ny vola laniana amin'ny PR nentim-paharazana dia nanana fiakarana avo lenta amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketing - amin'ny fanekena ny marika, fidirana amin'ny influencers, fifamoivoizana mivantana sy ankolaka ary farany fivadihana.
Tags: prfifandraisana amin'ny vahoakanentim-paharazana prfifandraisana amin'ny besinimaro
Ahoana no hampitomboana ny Twitter anao